Shawn McConneloug, Robert Rosen, Kira Obolensky iyo Irve Dell: Mawduuca Madadaalo
Maaddaama farshaxanno badanaa ka shaqeeya habdhaqanka, waxaan ku faraxsanahay dadaalka aan uga baxsaneyno fikirka silo. Nasiib wanaag, waxaa u muuqda in ay jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah mashaariicdan silic-busting ah halkaas! Wacyigelinta waxay dhiseysaa labadaba gudaha iyo dibedda farshaxanka farshaxanka ee ku saabsan suurtogalnimada wadashaqeyn dhex marta dadka caalamka ka soo jeeda aragtiyo kala duwan. Muuqaalkan quruxda leh ee muuqaalka ah, farshaxannadu waxay leeyihiin xirfado gaar ah iyo aragtiyo ah in la keeno, oo sii kordhaya, waxaa naloo soo martiqaaday miiska.
In kasta oo qaar badani ay u arkaan in tani ay tahay hab weyn oo lagu ballaarin karo qiimaha fannaaniinta ee bulshadeenna, iyo sidoo kale fursad shaqo macno leh oo loogu talagalay noocyada hal-abuurka, farshaxannada ka dambeeya mashruuca cusub ee jimicsiga ayaa qaadaya fikirkan hal tallaabo oo dheeraad ah. Halkii ay sugi lahaayeen in lagu casuumo miiska, waxay weydiinayaan su'aasha: Ka waran haddii farshaxanadu ay noqon karaan kuwa dhisaya miiskaas, abuurista menu iyo soo dirida martiqaadyada? Meel noocee ah ayaa farshaxannadu u abuuri karaan wadashaqeynta isdhaafsiga ah, xallinta mashaakilaadka ama xitaa horumarinta alaabta? Hawshani ma siin kartaa qaab waara oo loogu talagalay fanaaniinta xiisaynaya in ay ku xidhmaan meel ka baxsan anshaxooda oo ay yeeshaan saamayn bulsho?
Gymnasium wuxuu ka badan yahay mashruuca farshaxanka, waa wada-jir ah "hal abuur hal abuur leh" oo ay hoggaamineyso afar farshaxan oo naftooda u taagan xirfado kala duwan iyo aragti: Shawn McConneloug, Robert Rosen, Kira Obolensky iyo Irve Dell. Markii aanu u fadhiisanay waraysiga xagaagii hore ee muuqaalkan gaaban, waxay ku sigteen inay bilaabaan tijaabo ay ugu yeedheen Taangiga Tink - ururinta fanaaniinta, saynisyahano, naqshadeeyayaasha, qabanqaabiyeyaasha iyo barayaasha kuwaas oo isticmaali doona fikirka naqshadeynta qaabka loo abuuro fursado cusub oo wada shaqeyn ah. Bishii Agoosto, 2012 waxay ku qarxinayeen isbuuc dhammaadka mawduuca guud ee "hawada" ee siyaabaha khayaaliga ah iyo cayaaraha.
Waxaa nalagu dhiirrigeliyay Gymnasium iyo qaabka ay u wadaagaan iskaashiga farshaxanka. Maxaad u maleyneysaa? Miyuu jiraa suurtogalnimada habkan oo loo maro iskaashi dhexdhexaad ah? Waa maxay xirfadaha iyo aragtida gaarka ah ee farshaxanadu keenaan? Waa maxay khibradaha noocee ah ee aad wax ku wada shaqeysiisay kuwa kale oo ka baxsan edbintaada?